Ungakuvimbela Kanjani Futhi Ukhulule Izimpawu Zokungezwani Komkhuhlane Ezinganeni | Bezzia
Ungazivimba Kanjani Futhi Ukhulule Izimpawu Zokungezwani Ne-Rhinitis ezinganeni
UMaria Jose Roldan | 26/03/2021 22:00 | Iseluleko omama
Ngokufika kwentwasahlobo, kunezimo eziningi zokungezwani komzimba ezenzeka engxenyeni enkulu yabantu. Endabeni yezingane, okuvame kakhulu kwaziwa ngokuthi i-allergen rhinitis.
Lesi simo sokuphefumula siyacasula kakhulu kuleyo ndlu encane ngoba ibangela isiminyaminya esinamandla emakhaleni kanye nokucasuka okukhulu emehlweni. Esihlokweni esilandelayo sikukhombisa uchungechunge lwamathiphu angasiza ukunciphisa lezi zimpawu.
1 Ziyini izimpawu ze-allergen rhinitis ezinganeni?
2 Ungazivimba kanjani izimpawu ze-allergen rhinitis
3 Ungazikhulula kanjani izimpawu ze-allergen rhinitis
Ziyini izimpawu ze-allergen rhinitis ezinganeni?
Ukuba khona kwempova emvelweni kuyimbangela eyinhloko ye-rhinitis yokungezwani ezinganeni. Lokhu kuxabana komzimba kubanga ukudabuka nokucasuka emehlweni kuhlangene nenqwaba yamafinyila emakhaleni nokunwaya okuthile emphinjeni. Kuchungechunge lwezimpawu ezicasula kakhulu abancane, yingakho ukubaluleka kokuzivikela nokuzinciphisa.
Ungazivimba kanjani izimpawu ze-allergen rhinitis
Kubalulekile ukugcina imvelo ekhaya ihlanzekile futhi ihlanzekile ngangokunokwenzeka ngakho-ke kubalulekile ukuhlanza indlu yonke njalo.
Kufanele ugweme ukuba nezitshalo ezikhiqiza impova futhi izilwane ezilahlekelwa yizinwele eziningi.
Igumbi lengane kufanele libe nomoya nsuku zonke futhi ugeze okombhede kanye ngesonto.
Gwema okusalungiswa ngaphakathi endlini futhi izikhala ezinothuli oluningi.
Kubaluleke kakhulu ukugeza izandla zengane yakho izikhathi eziningana ngosuku, ikakhulukazi uma kade edlala emgwaqweni.
Ukudla okunempilo kubalulekile uma kuziwa ekuvimbeleni izimpawu ze-allergen rhinitis. Ukudla kufanele kube nezithelo nemifino ecebile ngovithamini C. Ukutholwa kwe-folic acid kufanelekile ukuvimbela izimpawu ezingabangelwa ukungezwani komzimba.
Ungazikhulula kanjani izimpawu ze-allergen rhinitis
Izidakamizwa noma imithi ibalulekile uma kukhulunywa ngokunciphisa izimpawu. Womabili ama-antihistamine nama-corticosteroids kufanele ahlinzekwe ngudokotela.
Ngaphandle kwemithi enjalo, Unganaka kahle uchungechunge lwamathiphu asiza ekunciphiseni lezi zimpawu ezingenhla:
Hlanza futhi ugeze kahle amakhala omntwana ngosizo lwe-saline solution.
Phakamisa umatilasi embhedeni ukuvimbela amafinyila ekuqoqeni emakhaleni.
Kusetshenziswa umswakama egumbini kubalulekile uma kukhulunywa ngokuthola indawo enomswakama.
Ukuphuza amanzi amaningi kusiza amafinyila athambe futhi ungabi nekhala eligcwele kakhulu.
Hlanza amehlo nge-gauze nesisombululo esincane sosawoti.
Ngamafuphi, lapho kufika intwasahlobo, i-allergen rhinitis ivame kakhulu ezinganeni, ngokuba yizimpawu zokungezwani komzimba nazo ziyacasula futhi azikhathazi. Kubalulekile ukuthi abazali bathathe zonke izindlela zokuzivikela ukuze ingane ikwazi ukuphila impilo enethezekile ngangokunokwenzeka nokuthi ingalimali yi-allergen rhinitis eshiwo ngenhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » UMadres » Iseluleko omama » Ungazivimba Kanjani Futhi Ukhulule Izimpawu Zokungezwani Ne-Rhinitis ezinganeni
Uyini umzila wemvelo nokuthi ungawunciphisa kanjani
Izinhlobo ezinhlanu zamalambu odonga ukukhanyisa amakhona akho